Quality | GGP
We are committed to deliver quality products on-time and defect free, every time.
Our products are tested on stringent quality checks and as per defined industry standards.
We control and inspect the different processes of production from the procurement of raw materials to the final delivery of Boxes.
Our Testing equipment includes :
ကျွန်တော်တို့သည် On-အချိန်နှင့်ချွတ်ယွင်းအခမဲ့အခါတိုင်းအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တင်းကြပ်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးမှုများအပေါ်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့သေတ္တာ၏နောက်ဆုံးပေးပို့ဖို့ကုန်ကြမ်း၏ဝယ်ယူရေးကနေထုတ်လုပ်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စစ်ဆေးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများလည်းပါဝင်သည်:
At GGP we recognize the face that packaging playsakey role in the overall marketing process. We therefore take time to clearly understand your brand, and then work with you from start to finish selecting the packaging options that bring out your product’s attributes and help to bolster your sales.
Store Finished Goods in Warehouse
with Moisture Control System
Packaging for Special Order
GGP မှာကြှနျတောျတို့ဟာထုပျပိုးခွုံငုံစြေးကှကျရှာဖှရေေးအတှကျသော့ခကြျအခနျးကဏ်ဍသောမကြွနှာကိုအသိအမှတျမပွု ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်ယူ, ပြီးတော့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အထွက်ကိုရောက်စေသောထုပ်ပိုး options များရွေးချယ်ခြင်းပြီးစီးဖို့က start ကနေသင်တို့ကို attribute တွေနှင့်သင့်ရောင်းအားအားကောင်းရန်ကူညီပေးသည်။